Tababar ku saabsan nabadda iyo badbaadada bulshada oo lagu qabtay Qardho – SBC
Tababar ku saabsan nabadda iyo badbaadada bulshada oo lagu qabtay Qardho
Tababarkan oo ku saabsan nabadda iyo badbaadada bulshada ee heer bulsho oo ay ka soo qayb galeen afar xaafadood oo ay ku jiraan tuulooyin hoostaga magaalada Qardho ayaa u jeedadu a heyd kor uqaadida nabadda iyo badbaadada bulshada ku nool Qardho iyo nawaaxigeeda.
Tababarkan oo socon doona mudo ku siman laba casho ayaa ka soo qayb galayaasha qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay kamid yihiin odayaasha dhaqanka , Culimada , Haweenka Dhalinyarada Horjoogayaasha xaafadaha waxaa la siin doonaa casharo la xiriira xalinta khilaafaadka , khatarta miinooyinka, walxaha qarxa iyo hubka haraadiga dagaalada .
Furitaanka tababarkan ay bixinayso Hay’adda DDG ayaa waxaa ugu horeyn furay duqa magaalada Qardho Maxamed Saciid Ciise Hogaamo waxana uu duqu si wayn ugu mahadceliyay hay’adda fulinaysa barnaamijkan oo ah hay’add si wayn wax ugu qabata bulshada ku nool gobolkan karkaar , waxana uu kula dar daarmay dad weynaha ka faa’idaysanaya tababarkan oo qaarkood ay ka yimaadeen meelo ka baxsan Qardho in ay ka faa’idaystaan tababarkan oo waxa la baray ay dadka sii gaarsiiyaan .
Maxamed C/shakuur Cusmaan oo ka socda hay’adda DDG ayaa isna sheegay in mashruucan uu faa’ido u leeyahay bulshada maadaama looga hadlayo nabadda iyo badbaada bulshada iyadoo sidoo kalena labarayo ka soo qayb galayaasha casharo la xiriira xalinta khilaafaadka .
Qaar kamid ah ka soo qayb galayaasha mashruucan ayaa iyana sheegay in ay wax wayn ka faa’ideen mashruucan oo ay sheegeen in ay ka barteen wax aysan hore u aqoon oo ay ka mid tahay xalinta khilaafaadyada iyo casharo kale oo muhiim , waxayna ka soo qayb galayaashau ku booriyeen hay’adda in ay sii wado mashruucyada kuwan lamidka ah oo bulshada lagu wacyi galinayo .
Tababarkan waxaa fulinaysa hay’adda DDG oo taageero maaliyadeed ka helaysa waaxda horumarinta caalimiga ingiriiska ee UK aid .